अस्मिता अधिकारीको स्वरमा नयाँ गजल - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	अस्मिता अधिकारीको स्वरमा नयाँ गजल
अस्मिता अधिकारीको स्वरमा नयाँ गजल
by Movie Club Nepal १० आश्विन २०७६, शुक्रबार १६:५५ October 10, 2019
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १६:५५ October 10, 2019
नेपाल आइडलकी अस्मिता अधिकारीको स्वरमा नयाँ गजल ‘त्यो जुनेली रात’ बोलको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सुरेश वाग्लेका प्रेमिल शब्द, रहेको उक्त गजलमा अर्जुन पोखरेलको संगीत छ । ‘त्यो जुनेली रात’ का एरेन्जर गोपाल रसाइली हुन् ।
भिडियोमा गायिका अस्मिता अधिकारीसंगै कलाकार पुस्कर कार्की प्रस्तुत छन् । निकेश खड्का निर्देशित भिडियोमा अस्मिता र पुस्करको केमेष्ट्रि समेत मज्जाको देखिएको छ । बुद्ध थापाले खिचेको भिडियोलाई बिकाश धमलाको सम्पादन गरेका छन् ।
बिनिता आमा बन्दै
आयुष्मान अब बिहेअघि फिल्म खेल्छन वा खेल्दैनन
३ माघ २०७५, बिहीबार ०९:५४
अब कमेडीतिर लाग्ने कि आर्यन ?
२९ पुष २०७५, आईतवार १३:५६
अब मोफसलमा ‘कथा काठमाण्डू’ !
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार १६:११
‘तिमी र म’मा कबिर र सूर्याको आउँदै !
१४ भाद्र २०७५, बिहीबार १६:३२
फिल्म ‘गीत गजल’ को सुटिङ प्याकअप !
१९ मंसिर २०७५, बुधबार १३:५०
जात्रै जात्रामा बर्षाको आश
३० बैशाख २०७६, सोमबार १३:५३